အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဇူလိုင် ၂၀၁၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဇူလိုင် ၂၀၁၅
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဇူလိုင် ၂၀၁၅
KFC နှင့် IMF က ပြောသော မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေး
မြန်မာနိုင်ငံသားများ KFC ကြက်ကြော်စားရရန် နာရီပေါင်းအတန်ကြာ တန်းစီစောင့်ဆိုင်း ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းများက ဇွန် ၃၀ ရက်၌ နိုင်ငံခြား သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် ပြူးတူးပြဲတဲ ပေါ်လာသည်။ Apple ကုမ္ပဏီ၏ အိုင်ဖုန်းမော်ဒယ်လ် အသစ်တစ်မျိုးကို ၀ယ်ယူရန် နာရီပေါင်းများစွာ တန်းစီစောင့်ဆိုင်း ခဲ့ကြသည်ဟူသည့် သတင်းမျိုးက နိုင်ငံခြား သတင်းဌာနများအတွက် အဆန်းတကြယ် မဟုတ်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကြက်ကြော်ဝယ်ယူရန် နာရီပေါင်း အတန်ကြာ တန်းစီစောင့်ဆိုင်းသည့် သတင်းက သူတို့အတွက် အထူးအဆန်း ဖြစ်ခဲ့သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံသည် လျှပ်စစ်မီး၊ ဆေးဝါးကိရိယာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများ ပိုမိုလိုအပ် နေသေးသော်လည်း အနည်းဆုံး KFC ဆိုင်တစ်ဆိုင်တော့ ရခဲ့ပြီ” ဟု နိုင်ငံခြား သတင်းဌာနတစ်ခုက ရေးသားဖော်ပြသည်။ မိသားစုအတွက် KFC ကြက်ကြော် ၀ယ်ရန် သုံးနာရီကြာ တန်းစီခဲ့ရသည့် မြန်မာလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက “သူက နိုင်ငံတကာမှာ ကျော်ကြားတယ်လေ။ ဒီတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၀ ၌ ဆိုင်များဖွင့်လှစ်ထားသည့် KFC ၏ ကြက်ကြော်များကို နေ့လယ်စာ စားချိန်၌ လူတန်းအရှည်ကြီးများ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြပုံကို နိုင်ငံခြား သတင်းဌာနများက ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံခြားမှ အသင့်စားသုံးနိုင်သည့် အစားအစာ ရောင်းချသည့်ဆိုင်များ ရန်ကုန်မြို့၌ ဖွင့်လှစ်ခြင်းမှာ ပထမဆုံး မဟုတ်ပါ။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ဘာဂါကုမ္ပဏီဖြစ်သော Lotteria သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ တစ်လွှား၌ ဆိုင်ပေါင်း ခြောက်ခုထက်မနည်း ရှိပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးဆုံးပြီး အရပ်သား အမည်ခံထားသည့် အစိုးရအဖွဲ့ တက်လာပြီးနောက်ပိုင်း ပိတ်ဆို့မှုအများစု ရုပ်သိမ်းပေးခံရပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအချို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် KFC သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဖွင့်လှစ်သည့် ပထမဆုံး အထင်ကရ အမေရိကန် အစားအစာဆိုင် တစ်ခုဖြစ်သည်။ အချိုရည် ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် ကိုကာကိုလာနှင့် ပက်စီသည် လည်းကောင်း၊ ကားကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် ချက်ဗလက်နှင့် ဖို့ဒ်ကုမ္ပဏီတို့သည် လည်းကောင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ KFC ထက် ဦးစွာ အရောင်းဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် အမေရိကန် ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။
KFC သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းဖက်နှင့်အတူ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုင်ခုံ ၂၄၀ ပါသည့် ရန်ကုန်ဆိုင်ခွဲသည် ပျူငှာရက်ရောမှုများ၊ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချပေးမည်ဟု KFC ထုတ်ပြန်ချက်၌ ပါရှိသည်။ KFC ကြက်ကြော်နှစ်တုံး တစ်ပွဲလျှင် ကျပ် ၃၅၀၀ ဖြင့် ရောင်းချပေးပြီး ယင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှုန်း အများဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အစိုးရက ပထမဆုံးအဖြစ် တစ်နေ့အနည်းဆုံး လုပ်ခဟု သတ်မှတ်ရန် အဆိုပြုထားသည့် ငွေပမာဏနှင့် ညီမျှသည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားနေကြသော မြန်မာလူငယ် အများအပြားသည် KFC ကြက်ကြော်ဆိုင်ကို ရှားရှားပါးပါး ဇိမ်ခံရန် နေရာတစ်ခုဟု သဘောထားကာ မိုဘိုင်းဖုန်းများဖြင့် ဆယ်ဖီများရိုက်ကာ တပျော်တပါး ဖြစ်နေကြသည်ကို Facebook ၌ တွေ့မြင်ကြရသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF) က ဇူလိုင်လ ၁ ရက်၌ ထုတ်ပြန်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် ကျဆင်းလာနိုင်သည့် အန္တရာယ်မျိုးနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သတိပေးခဲ့သည်။ ဒေါ်လာတန်ဖိုး အားကောင်းနေခြင်း၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ဈေးနှုန်းများ ကျလာခြင်းတို့က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘတ်ဂျက်နှင့် ပြည်ပငွေပေးငွေယူ အခြေအနေများကို ပိုမိုအားလျော့ လာစေနိုင်ကြောင်းနှင့် ချေးငွေများ အလျင်အမြန် တိုးပွားလာနေခြင်း၊ ဘတ်ဂျက်လိုငွေ ချဲ့ထွင်လာခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်ရေး လိုငွေပြမှု မြင့်မားလာခြင်းတို့ကြောင့် ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်မှုနှင့် ပြည်ပနှင့် အပေးအယူ တည်ငြိမ်မှုတို့အပေါ် အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ၀င်ရောက်လာခြင်းသည် ကြိုဆိုလက်ခံသင့်သည့် ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် စီးပွားရေး ကျဆင်းလာနိုင်သည့် အန္တရာယ်မျိုးနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများစွာ ပေးနိုင်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးနှင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပိုမိုအကျိုးရှိစေမည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုး ဖြစ်ပါက ပိုမိုကောင်းမွန်လိမ့်မည်ဟု ယူဆပါကြောင်း The Daily Eleven သတင်းစာက ရေးသားအပ်ပါသည်။
ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာ့အာဘော်
KFC ကို တန်းဆီပြီးဝယ်ရတာ၊ ဆိုင်တံခါးကိုပါ ပိတ်ပြီးထားရတာ ဒါမျိုးတွေကို အကြောင်းပြ နိုင်ငံကို မကောင်းပြောနေတာကိုတော့ ကျွန်တော် တော်တော်ကို မျက်မုန်းကြိုးနေပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်မြို့လုံးမှာမှတစ်ဆိုင် (ပြောရရင် တစ်နိုင်ငံလုံး) ထဲသော ရှိတဲ့ ဒီဆိုင်ကို လူတွေများစွာလာဝယ်ကျတာ မထူးဆန်းဟုထင်သည်။ ၂၄၀ထဲသော ထိုင်ခုံတွေကလဲ handle လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်။ နာမည်ကြီးဆိုင်တွေမှာ စားချင်ရင် ဒီလိုပဲ စောင့်ရတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသား။ ဒါကိုမှ အပြစ်သဘောနဲ့ ရေးသား ပြောဆိုနေကျသူများကို ကျွန်တော် အနေနဲ့ နိုင်ငံရဲ့ တိုးတက် ပြောင်းလဲမှုကို အပြုသဘော မမြင်နိုင်သူတွေအဖြစ် ရဲရဲ ဝေဖန်မည်။
ပြီးတော့ တစ်ပွဲ ၃၀၀၀ကျော်ဆိုတာကလဲ KFCအတွက် ဒီနိုင်ငံမှာမှ ပိုတိုးယူထားတဲ့ ပမာဏမဟုတ်။ မလေးရှာနိုင်ငံမှာလဲ rice plate တစ်ပွဲကို 11>RM ဆိုတော့ မြန်မာငွေနဲ့ တွက်ကြည့်ရင် ၃၃၀၀ တော့ရှိနေသည်။ ဒါက ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်သည်ဆိုတာထက် ၀င်ငွေနည်းလို့ မစားနိုင်တာလို့ပဲ ကျွန်တော်မြင်သည်။
ကဲပြောရင်းနဲ့ ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်းတွေပါလာတော့မယ်။ The Daily Eleven ရဲ့ အယ်ဒီတာအာဘော်ကို ဝေမျှပေးလို့ ကျေးဇူးပါ သူကြီး
ကျနော်အမြင်ပြောရရင်တော့ တစ်ရက်လုပ်ခ ကို ဘယ်လောက်ထိ တိုးပေးမယ်လို့ သတ်မှတ်တာထက်
ကုန်ဈေးနူန်း အသင့် အတင့်နဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတွေ လောက်င ဖူလုံ့စွာ စားသောက်နိုင်အောင်
အစိုးရအပါအ၀င် တာဝန်ရှိသူတွေက ဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးသင့်တယ်ထင်ပါတယ်
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ မပိုင်ဝက်မွေးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဘာ့ကြောင့်ပြောတာလဲ (Text Report)
အာဏာရကြံ့ခိုင်ရေးပါတီထဲ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်းတို့ကြား အကွဲအပြဲမှာ တစ်နေ့တစ်ခြား ထင်ရှားလာနေပြီး လာမယ့် ၂ဝ၁၅ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပါတီကိုယ်စားပြု လွှတ်တော်အမတ်စာရင်းတွေ မထုတ်ပြန်ခင်အချိန်မှာ သူတို့ပါတီဟာ မပိုင်ဝက်မွေး၊ မိအေးနှစ်ခါနာခဲ့ရတယ်လို့ ပါတီအာဘော် ပြည်ထောင်စုနေ့စဉ်က ဇူလိုင် ၅ရက်နေ့မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့အနေအထားဟာ ကြွေးဟောင်းကိုလည်းဆပ်နေရပြီး ကြွေးသစ်ကိုလည်း ဆပ်နေရတယ်လို့ ပါတီဗဟိုအတိုင်ပင်ခံ ဦးစိုးသာရဲ့ ပြောဆိုချက်ကို ကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ပါတီဟာ ပါတီဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စုပေါင်းဦးဆောင်မှုနဲ့ မယိမ်းမယိုင် ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေက လွှတ်တော်တွင်းဆောင်ရွက်ချက်ကို ပါတီလုပ်ရပ်အဖြစ်မြင်နေပြီး အစိုးရရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့လုပ်ရပ်အဖြစ် မြင်နေတာကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီဖြစ်ပေမယ့် ပါတီပုံရိပ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ ဦးစိုးသာရဲ့ပြောဆိုချက်က ဆိုပါတယ်။
ဒါဟာ ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်တုန်းက NHK သတင်းဌာနကို သမ္မတဒုတိယသက်တမ်းအတွက် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကို တုံ့ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီ တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးသိန်းဇော်ကလည်း သူတို့ကြံ့ခိုင်ရေးဟာ အနိုင်ရပါတီဖြစ်ပေမယ့် နိုင်ငံတော်ယန္တရားလည်ပတ်မှုမှာ ပါတီအနေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခွင့် အခွင့်အလမ်းတွေ နည်းပါးခဲ့တယ်လို့လည်း ပြည်ထောင်စုနေ့စဉ်က ဆိုပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းနဲ့ ဦးစိုးသိန်းတို့ဟာ ကယားပြည်နယ်ကနေ ပါတီကိုယ်စားဝင်ရောက်ခွင့်ပေးဖို့ တင်ပြချက်ကို ပါတီက ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာ ဝန်ကြီးနှစ်ယောက်ဟာ တစ်သီးပုဂ္ဂလအဖြစ်နဲ့ ကယားပြည်နယ်က လူဦးရေအနည်းဆုံး မြို့နယ်၂ခုကနေ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။
ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပါတီဗဟိုအတိုင်ပင်ခံ ဦးအောင်သောင်းက သူ့အပေါ် အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်အောင် အစိုးရထဲက လုပ်ခဲ့တယ်လို့ သွယ်ဝိုက်စွပ်စွဲထားပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမှာလည်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက အဓိကပြင်ဆင်လိုတဲ့အချက်တွေကို မြန်မာသမ္မတက စစ်တပ်ကို ကန့်ကွက်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပုံရတာကြောင့် ဘယ်လိုမှ မပြင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့လည်း လွှတ်တော်အမတ် ဦးလှဆွေက သတင်းမီဒီယာတွေကို တရားဝင်ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီချုပ်က.. ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းနဲ့ ဦးစိုးသိန်းတို့ကို.. ဒီချုပ်အမတ်အဖြစ်ဝင်ပြိုင်မလားဆိုပြီး.. ခေါ်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်…။
ဒါမှမဟုတ်.. ကိုမိုးသီးတို့ရဲ့. လူ့ဘောင်သစ်ကပေါ့..။
တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်ကြတာပဲ.. မူရင်းပါတီနဲ့အယူအဆမတူ.. တသီးပုဂ္ဂလလုပ်ကြသလို.. အတိုက်အခံပါတီဖက်ပြောင်းလုပ်သူတွေလည်းရှိတာပဲ..။
သူတို့က လှည့် ကွက် အတော်များမယ်ထင်ပါတယ်
သူတို့ နဲ့ အဆင်မပြေလို့ ခွဲထွက်သယောင်ပြပြီး သူတို့ ပိုင်တဲ့ နယ်မှာဝင်ပြိုင်လို့ ရခဲ့ ရင်
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၆ ရက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်)
၁။ ရန်ကုန်မြို့အား ခေတ်မီမြို့တော်အဖြစ် တည်ဆောက်ရာတွင် မြို့ပြစည် ပင်ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများကို အထောက် အကူပြုရန် ရည်ရွယ်၍ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ဆက်လက်အသုံးပြုရန် အစီအစဉ်မရှိ တော့သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ယခင်နိုင်ငံတော်ကာ ကွယ်ရေး တက္ကသိုလ်နှင့် အမှတ် (၁) မော်တော်ယာဉ် တပ်ရင်း နေရာဟောင်း တို့အား ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် တင်ဒါ ခေါ်ယူခဲ့ရာ အောက်ပါ ကုမ္ပဏီများမှ တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်-
(က) ရွှေတောင်ဖွံ့ဖြိုးမှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်
(ဂ) သုခရတနာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၂။ အထက်ပါ တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများက ကုမ္ပဏီအလိုက် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဟိုတယ်များ၊ Service Apartment များ၊ ကုန်တိုက်ကြီး များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဌာနများ၊ လူနေအိမ်ခန်း အဆောက်အဦ များနှင့် ရုံးအဆောက်အဦများပါဝင်သည့် စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲ၍ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံ မှု ကော်မရှင်သို့ အဆိုပြု ချက်များတင်ပြခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်အနေဖြင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီိးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ သားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေများနှင့်အညီ စိစစ်ကာ ခွင့်ပြုမိန့်များ ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
၃။ ဤသို့ ခွင့်ပြုမိန့်များ ထုတ်ပေးပြီးနောက် စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော် မှုကြောင့် ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီးအား ထိခိုက်မှုရှိမည်ကို ရဟန်းရှင်လူပြည်သူ အချို့ စိုးရိမ်ပူပန်လာခြင်း၊ ပညာရှင် အချို့က ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ ပေးပို့အကြံပြုခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်သူ အချို့က စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းပေးရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ မေတ္တရပ်ခံလာခြင်း စသည့်အခြေအနေများကြောင့် လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ကလည်း စီမံကိန်းအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် မသင့်ကြောင်း သုံးသပ် တင်ပြချက်အရ လည်းကောင်း၊ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနကလည်း စီမံကိန်းများရပ်ဆိုင်း ပေးပါရန် တင်ပြချက်အရလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော် အစိုးရအနေဖြင့်လည်း ရွှေတိဂုံစေတီတော် အပါအဝင် သိင်္ဂုတ္တရကုန်းတော်ရှိ စေတီပုထိုးများ၊ သာသနိက အဆောက်အအုံ များ၊ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် အဆောက်အအုံများအား မည်သည့် အကြောင်းကြောင့်မျှ ထိခိုက်မှု မဖြစ်ပေါ်ရေး ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရန် လိုလားခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ညှိနှိုင်းရာတွင် ၎င်းတို့ကလည်း လိုလားစွာ လက်ခံခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် သဘောတူညီ ချက်ဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ယခင်နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး တက္ကသိုလ်နှင့် အမှတ် (၁) မော်တော်ယာဉ်တပ်ရင်း နေရာဟောင်း တို့တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းအားလုံးကို ဤအမိန့်ကြော်ငြာ စာထုတ်ပြန်သည့် နေ့မှစတင်၍ အပြီးသတ် ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။
၄။ ဤသို့ စီမံကိန်းအားအပြီးသတ် ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းကြောင့် စီမံကိန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ထိခိုက်နစ်နာမှု မရှိစေရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ဆက်လက် ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဦးမျိုးအောင်(အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှု ဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာန)
မေး။ ။ အနည်းဆုံး အခကြေးငွေ တစ်ရက် ကျပ် ၃၆ဝဝ သတ်မှတ် လိုက်တဲ့ အပေါ် နိုင်ငံခြားသားလုပ်ငန်း ရှင်တွေက စက်ရုံပိတ်မယ်။ လျော်ကြေး မပေးနိုင်ဘူးလို့ ပြောဆိုတဲ့အပေါ် တကယ်လို့ အဲဒီလိုများလုပ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိတယ်ဆိုတာ သိပါရစေ။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်ရှင်တွေ မလုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းရယ်။ မလုပ်နိုင်လို့ ထွက်သွားရင် အရေးယူမယ့် အပိုင်းရယ်။ အလုပ်ပိတ်ပြီး ပြန်သွားတယ်ဆို ဒီအတိုင်းထွက်သွားလို့မရဘူး၊ ဥပဒေ ကရှိပြီးသား၊ အလုပ်သမားကို အလုပ်အတွက် နစ်နာကြေးလျော်ကြေးပေးရမယ်။ အရင်တုန်းက ဒီလိုလုပ်ခဲ့လို့ အရေး ယူခဲ့ဖူးတဲ့ သာဓကတွေရှိတယ်။ ပိတ်သိမ်းတာက သူတို့ရဲ့ ကဏ္ဍ။ အဲဒီအပေါ်မှာ သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းအခြေ အနေအရ ပိတ်မယ်ဆို ပိတ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နဲ့အညီ၊ ဥပဒေနဲ့အညီ ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ တကယ်ပြန်၊ မပြန်ဆိုတဲ့ကိစ္စ။ တကယ် ရုပ်သိမ်း၊ မသိမ်းဆိုတဲ့ကိစ္စ။ အခု ဖြစ်နေတာက အထည်ချုပ်မှာ။ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်တွေထဲမှာမှ တချို့ပေးနိုင်တယ်။ ဒီမှာဖြစ်နေတာက ရန်ကုန် မှာရှိတဲ့ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်တွေပဲ။ အဲဒီထဲမှာတောင် အကုန်မဟုတ်ဘူး။စက်ရုံပိတ်မယ်ဆိုတာ အလုပ်ရှင်က တကယ်ပဲပြောခဲ့တာလား။ သူတို့ မန်နေဂျာ၊ ကိုယ်စားလှယ်တွေ က ပြောတာလားဆိုတာ စိစစ်ဖို့လိုတယ်။ စက်ရုံပိတ်သွားတာက သူတို့လုပ်ပိုင် ခွင့်ပဲ။ စက်ရုံပိတ်သွားလို့ အလုပ် သမားတွေအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင် နိုင်အောင် လုပ်ပေးရမှာကတော့ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ တာဝန်ပါလို့ ပြောချင်တယ်။
ဒီအလုပ်သမားခ ကိစ္စကလည်းနောက်ဆုံးတော့ ဘုရာကြီး ဘဲ နာပါတယ် ဇာတ်လမ်းဆိုက်တော့ မယ်ထင်ပါတယ်။
ဘာမှ တောင်းဆိုလို့ မရ ဘဲ ဒုံရင်း ဘဲ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်
အလုပ်သမား အလုပ် လက်မဲ့ ဖြစ်သွားရင် နိုင်ငံတော် အနေနဲ့ ဘယ်အတိုင်းအတာ ထိ တာဝန်ယူနိုင်သလဲ ဆိုတာ
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ အသက် ၆၀ ပြည့်သည့်နေ့တွင် အငြိမ်းစားယူသည့် စနစ်အား ယခုကျင့်သုံးနေသည့် ပုံစံအတိုင်း ဆက်လက်ထားရှိရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရသို့ တိုက်တွန်းကြောင်း အရေးကြီးအဆိုကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုယ်စားလှယ် တင်သွင်း
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ အသက် ၆၀ ပြည့်သည့်နေ့တွင် အငြိမ်းစားယူသည့် စနစ်ကို ယခုကျင့်သုံးနေသည့် ပုံစံအတိုင်း ဆက်လက်ထားရှိရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း အရေးကြီးအဆိုကို ဇူလိုင် ၈ ရက်တွင်ပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ညိုက တင်သွင်းခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရလခစားဝန်ထမ်း ကိုးသိန်းကျော်နှင့် နေ့စားလခစားဝန်ထမ်း တစ်သိန်းကျော်၊ စုစုပေါင်း အစိုးရ၀န်ထမ်းပေါင်း ၁၃ သိန်းကျော်ရှိကြောင်း၊ အလုပ်သမား ၇၃ သိန်းကျော်၊ လုပ်ငန်းရှင် ၁၀ သိန်း၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ၈၇ သိန်းကျော်၊ အလုပ်ရှာဆဲ ကိုးသိန်းကျော်၊ မိသားစုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ ၃၉ သိန်းကျော်နှင့် အငြိမ်းစား သုံးသိန်းခွဲကျော် ရှိသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရကြောင်း၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအတွက် အသုံးစရိတ်ကို နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေမှ တိုက်ရိုက်ကျခံသည့် စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ယနေ့ကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည့် အချိန်ကာလ၌ ၀န်ထမ်းများအရေအတွက် တိုးမြှင့်ခြင်း၊ လျှော့ချခြင်းတို့သည် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေအရ အလွန်အလေးထား ဆောင်ရွက်ရမည့် အချိန်ဖြစ်ကြောင်း ဦးခင်မောင်ညိုက ဆိုသည်။
ဦးအောင်သောင်း ကျန်းမာရေးအခြေအနေ စိုးရိမ်ရ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး နဲ့ ဖံွ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုအတိုင်ပင်ခံ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သောင်းဟာ မနေ့ညက ဦးနှောက်သွေးယိုစိမ့်တာကြောင့် နေပြည်တော် ကုတင် ၁၀၀၀ ဆေးရုံ အရေးပေါ်ကုသဆောင် ICU မှာ တက်ရောက်ကုသမှုခံယူနေပါတယ်။
ဦးအောင်သောင်းကို ကုသပေးနေတဲ့ ဦးနှောက်ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြတ်သူဝင်းက “ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းပြီး ပေါက်သွားတာ၊ အခြေအနေ ဆိုးတယ်။ “လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ နံနက်ပိုင်းမှာ ဦးအောင်သောင်းကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း တို့ လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဦးအောင်သောင်းကို ဒီကနေ့ နေ့လည် ၁နာရီမှာ နေပြည်တော် ခုတင်၁၀၀၀ ဆေးရုံကနေ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ဆေးကုဖို့ ပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ရိုက်ကူး – မျိုးသန့်ခိုင်
ဦးအောင်သောင်း အမည်မည်းစာရင်းသွင်းခံရခြင်းကို ကန့်ကွက်ရှုတ်ချမှု ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ကန့်ကွက်သူမရှိ
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သောင်းကို အမေရိကန်နိုင်ငံက အမည်မည်းစာရင်း သွင်းလိုက်ခြင်းအပေါ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်က ကန့်ကွက်ရှုတ်ချရန် နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင် အတည်ပြု လိုက်သည်။
ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးအောင်သောင်းကို အမည်မည်းစာရင်းထည့်သွင်း လိုက်ခြင်းသည် လွှတ်တော်နှင့် ၎င်းကို ထောက်ခံသည့် မဲဆန္ဒရှင်များ ဂုဏ်သရေကို ညှိုးနွမ်းစေသောကြောင့် လွှတ်တော်က ကန့်ကွက်ရှုတ်ချရန် မင်္ဂလာဒုံမဲဆန္ဒနယ်မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်မောင်ဝင်းက ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် အဆိုတင် သွင်းခဲ့သည်။
အဆိုကို တနိုင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမျိုးဆွေက ထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအဝင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးက ကန့်ကွက်သူမရှိ အတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်သောင်းကို အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု စာရင်းတွင် အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်က ထည့်သွင်းလိုက်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ၎င်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းချုပ်၍ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်လည်း စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိစေရန် ကန့်ကွက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
7 Day Daily –7ရက်နေ့ စဉ်သတင်းစာ
ဦးထွန်းကြည်၊ ဦးခင်ညွှန့် တို့ကို ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့သူ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီပဲယင်းမှာလုပ်ကြံခဲ့တဲ့ သူ၊ လက်ရှိ သမ္မတအပါအ၀င် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးများကို အထင်မကြီးသူ၊ စာဖတ်နေသူကြီး ကိုတောင် လှည့်စားနိုင်ခဲ့တဲ့ ၀ါရင့်သက်တော်ရှည် ၀န်ကြီးဟောင်း တစ်ယောက်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု တွေကတော့
– ရန်ကုန် လှိုင်ရတနာမွန်အိမ်ရာမှ နန်းတော်တမျှခမ်းနားတဲ့ အိမ်ကြီး
– နေပြည်တော် ဥတ္တသီရိမှ ဧရာမအိမ်ကြီး
– ပြင်ဦးလွင်၊ကန်တော်ကြီး ဥယျာဉ်အနီး ၀န်ကြီးရပ်ကွက်ရှိ အိမ်ကြီး
– ပုပ္ပါးတောင်ကလပ်မှ အနားယူရန်ဆောက်လုပ်ထားသော အိမ်ကြီး
– ပုလဲမြို့သစ် ရွှေနံ့သာရပ်ကွက်က အိမ်ကြီး
– မှော်ဘီမှ Star Flower တစ်ရှုးစက်ရုံ
– စစ်တောင်းစက်ရုံအနီးရှိ နောက်ထပ်တစ်ရှုးစက်ရုံ
– ပုလဲမြို့သစ်က သစ်ခွဥပေါင်းစက်ရုံ
– ပန်းတောင်းက ဧက(၁၀၀)ခန့်ရှိ ဇီးတော်သီးခြံ
– ပလိပ်က စိန်တလုံးသရက်ခြံ
– လှည်းကူးက ဧကများစွာကျယ်ဝန်းသော ကိုယ်ပိုင်အပန်းဖြေဥယျာဉ်ကြီး
– နေပြည်တော်မင်းကုန်း အုတ်စက်အနီး ၃၈ ဧက ကျယ်သည့် ခြံကြီး
– United Amara ဘဏ်လုပ်ငန်း
– အမရာ ဟိုတယ်(နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဇုံ)
– IGE ပိုင် မန္တလေး စကျင် ကျောက်ပြားစက်ရုံ (ယခင် စက်မှု(၁)စက်ရုံကို သက်သာသော နှုန်းထားဖြင့် ၅ နှစ် ဌားရမ်းထား)
– ရန်ကုန် သမ္မတ၊ စထရင်း၊ အင်းလျားလိပ် ဟိုတယ်ကြီး(၃)ခု IGE က လုပ်ကိုင်ခွင့်ရ
-အောင်ရည်ဖြိုး၊ IGE၊ MRT စသည့် အမည်အမျိုးမျိုးဖြင့် ရွှေတူးဖော်လုပ်ငန်း၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၊ အကြီးစား လျှပ်စစ်ကြိုးခွေများ တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်း
– BANK OF AUSTRALIA တွင် ဒေါ်ခင်ဝင်းနွယ် အမည်ဖြင့် အပ်နှံထားသော နိုင်ငံခြားငွေပိုင်ဆိုင်မှု
– BANK OF ENGLAND တွင် ဒေါ်ခင်ဖြူလှ အမည်ဖြင့် အပ်နှံထားသော နိုင်ငံခြားငွေပိုင်ဆိုင်မှု
-OCBC တွင် အပ်နှံထားသော IGE ကုမ္ပဏီိပိုင်ရှင် ဦးနေအောင်၏ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း
– စက်မှု(၁) စက်ရုံများသို့ တင်သွင်းခဲ့သည့် အောင်ရည်ဖြိုးကုမ္ပဏီ၏ စာရင်းရှင်းတမ်း
-စက်မှု(၁)စက်ရုံများနှင့် အခြားတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည့် ကျော်သာ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ၏ ၀န်ကြီးဌာန ဘတ်ဂျက် ရယူမှုများ……..
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဗဟိုအတိုင်ပင်ခံဦးအောင်သည်ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့ ည၁၁ နာရီခန့် တွင် ဦးခေါင်းအတွင်းရှိဦးနှောက်သွေးကြောငယ်လေး များပေါက်သွားသဖြင့်နေပြည်တော်ကုတင် ၁၀၀၀ ဆေးရုံသို့ အရေးပေါ်တင်လိုက်ရကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
‘အခြေအနေကတော့စိုးရိမ်ရတယ်အသက်ကလဲကြီးနေပြီးလေ ခုချိန်ထိသတိမရသေးဘူး ’ ဟုဦးအောင်သိန်းလင်းကဦးအောင်သောင်း ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကြေငြာသည့် ည ၁၁ နာရီခန့် တွင်အပေါ်သွေး ၂၂၀ အောက်သွေး ၁၂၀ ထိသွေးတိုးလာခဲ့ပြီး မူးလဲသွားရာမှ နေပြည်တောင်ကုတင် ၁၀၀၀ ဆေးရုံသို့ အရေးပေါ်တင်လိုက်ရတာပါ။
လူတယောက်မကျမ်းမာ.. ဒုက္ခတွေ့တာ…သေတာတွေပေါ်မူတည်ပြီး.. လူအများစုတွေပျော်ကြတာမှာ…အပြစ်ဖြစ်မဖြစ်.. စိစစ်နိုင်ဖို့…
အဘ အူးအောင်တောင်း ကျမ္မာပါဇီ
(နိုင်ဂံဒေါ် ဇယိတ် နဲ့ မတာ ချရရင် ပြည်သူ့ေ-ာက်ဆံ ပဲ ကုန်အုံးမယ်)
နားသွားပီးမှ ပိုးဆိုးပက်စက် ဖြစ်လည်း ရတာပဲ အဘရယ်… တောင့်ထားဇမ်းဘာ…
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေသည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဗဟိုအတိုင်ပင်ဦးအောင်သောင်းသည် အသက်အန္တရယ်စိုးရိမ်စရာမရှိတော့ကြောင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်သည့် ဦးအောင်သိန်းလင်းက ပြောသည်။
ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုးဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် ဦးအောင်သိန်းလင်းက ပြောကြားသည်။
ဆုံးသွားတဲ့အချိန်က ၄ နာရီ ၂၀ ပါ။
ဒီနေ့မနက် (၉) နာရီမှာ အလောင်းကို ပြန်သယ်သွားပြီလို့ အတိအကျ ကြားထားတယ်။
ဒါပေမယ့် သတင်းဋ္ဌာနတွေကို ဒီသတင်းမပြန့်အောင်လိုက်ပိတ်နေတယ်လို့လည်းသိရတယ်။
ဒီသတင်းတွေအကုန်လုံးဟာ နာမည်ဖော်ဖို့ မသင့်တဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီက ရနေတာပါ။
ဦးအောင်သောင်းဟာ သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးအတွက် ပြင်ဆင်ထားပေမယ့် ဒီလောက်မြန်မယ်လို့ ထင်ထားပုံမရပါဘူး။
လုပ်လက်စ တွေကို လက်စသတ်ဖို့ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးထိုင်ရပါဦးမယ်။
ဖြုတ်စရာရှိတာဖြုတ်၊ ပြေးစရာရှိတဲ့သူတွေပြေး၊ ၀ှက်စရာရှိတာတွေဝှက်ပြီးမှ သေဆုံးကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
လူတစ်ကာယိုတဲ့ချေး ပုစွန်ခေါင်းမှာ စုဆိုသလို ပုလင်းတူဗူးစို့တွေကလည်း ဦးအောင်သောင်းကို လွှဲချဖို့ အထုတ်တွေဖြည်နေကြပါပြီ။
အဲဒီ Accounts တော့ ဟက်ခံရပြီလားမသိ ဒေါ်ဇီဇီလေး ရေ့။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ပြင်ဆင်လိုတဲ့အဓိကအချက်တွေ ရှုံးခဲ့ပြီ
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမူကြမ်းထဲက သမ္မတ၊ ဒုတိယသမ္မတတွေ၊ ဝန်ကြီးတွေ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးတွေဟာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မဖြစ်ရဆိုတဲ့အချက်ကို ပယ်ဖျက်တဲ့ ပြင်ဆင်ချက်တွေ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်က ကော်မတီ၊ ရေးရာကော်မတီတွေကို ပြည်ထောင်စုအဆင့်သတ်မှတ်တဲ့ ဖြည့်စွက်ချက်တွေ၊ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်တွေကို သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကပဲ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ ပြင်ဆင်ချက်တွေပါဝင်တဲ့ ပုဒ်မ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄၊ ၁၁၅၊ ၁၄၇၊ ၂၃၂၊ ၂၃၄၊ ၂၄၉၊ ၂၆၁ ပုဒ်မတွေဟာ အမြင့်ဆုံးထောက်ခံမှု ၃၈၄မဲ (၆ဝ.၆၆%)ပဲ ရရှိခဲ့တာကြောင့် အတည်မပြုနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှာ ဒုတိယတရားသူကြီး ၂ဦးကို တိုးချဲ့ခန့်ထားဖို့၊ တရားသူကြီးချုပ်နဲ့ဒုတိယတရားသူကြီးတွေကို ရွေးချယ်ရာမှာလည်း သမ္မတနဲ့ဒုတိယသမ္မတတွေကိုရွေးသလို လွှတ်တော်ကပဲ ရွေးချယ်ဖို့၊ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခုံရုံးကိုလည်း အလားတူပြင်ဆင်ရွေးချယ်ဖို့၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ခန့်အပ်တဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ ပုဒ်မ ၂၉၉၊ ၃ဝဝ၊ ၃ဝ၁၊ ၃ဝ၂၊ ၃ဝ၃၊ ၃၁၂၊ ၃၂၁၊ ၃၂၄၊ ၃၃၃၊ ၃၉၆၊ ၃၉၈၊ ၂၉၉နဲ့ ၄ဝ၂တို့ကို စစ်တပ်က မထောက်ခံခဲ့တာကြောင့် အတည်မပြုနိုင်ဘဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို ဒီကနေ့မဲပေးတက်ရောက်ကြတဲ့ လွှတ်တော်အမတ် စုစုပေါင်း ၆ဝ၅ဦး (၉၅.၅၇%)ထဲမှာ ပြည်သူကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်စုစုပေါင်းက ၄၁၁ယောက် (၆၄.၉၂%)ပဲရှိခဲ့တာကြောင့် အာဏာရပါတီက အဓိကပြင်ဆင်လိုတဲ့အချက်တွေကို သမ္မတနဲ့စစ်တပ်က လုံးဝကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။
(ဓာတ်ပုံ – ကောင်းခန့်/ကမာရွတ်မီဒီယာ)
ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်း၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်ဘိုတို့ အပါအ၀င် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ခရိုနီ ဦးတေဇရဲ့ ဇနီး ဒေါ်သီတာဇော်တို့ သုံးဦးကို အမည်မည်း စာရင်းကနေ ပယ်ဖျက် လိုက်ကြောင်း အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက မနေ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေး ဆက်ပြီးချိုးဖောက်နေတဲ့ အာဏာပိုင်တွေကိုလည်း အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အမည်မည်း စာရင်း မှာထပ်တိုးပြီး ထုတ်ပြန်သင့်တယ်လို့ HRW လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို မအင်ကြင်းနိုင်ကတင်ပြမှာပါ။
ဇူလိုင် (၉)ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ ကြေညာချက်မှာ အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ OFAC ခေါ် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်း ထိန်းချုပ်ရေးဌာနရဲ့ SDN ခေါ် ပစ်မှတ်ထား ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ အရေးယူဖို့ အထူးသတ်မှတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ စာရင်းကနေ သူတို့သုံးဦးရဲ့နာမည်တွေကို ပယ်ဖျက်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားတာပါ။
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်းနဲ့ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်ဘိုတို့ နှစ်ဦး ကွယ်လွန်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ အတွက် အရင်က အမည်မည်း စာရင်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီခြင်း မရှိတော့တာကြောင့် သူတို့အမည်တွေကို ပယ်ဖျက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ပြောခွင့်ရအမျိူးသမီးကဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းကို အီးမေးလ်နဲ့ ပေးပို့တုန့်ပြန်တဲ့စာမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဒါအပြင် ဒေါ်သီတာဇော်ကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ နီးစပ်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ခရိုနီ ဦးတေဇရဲ့ ဇနီးဖြစ်လို့ ၂၀၀၇ခုနှစ် ဖြည့်စွက်ချက် အမည်မည်းစာရင်းမှာ ပူးတွဲ ထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ အခုသူရဲ့ အခြေအနေပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပြီး အရင် သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီတော့တဲ့အတွက် သူကိုလည်း အမည်မည်း စာရင်းကပယ်လိုက်ကြောင်းအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ပြောခွင့်ရ အမျိုးသမီးရဲ့စာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
အခုလို အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက မြန်မာအမည်မဲစာရင်းတချို့ ပယ်ဖျက် လိုက်တာကိုကြိုဆိုပေမဲ့လည်း ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကို အများပြည်သူ သိအောင် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖေါ်ပြသင့်တယ်လို့ နယူးရောက်အခြေစိုက် HRW လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ အာရှရေးရာတာဝန်ခံ Dave Matheison ကဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။
“သူတို့ကြေညာချက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုကြည့်ရင် ကျနော်တို့အတွက် ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့ အချက်တွေသိရဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ဘယ်လို အချက်တွေကြောင့် အမည်မဲစာရင်းကနေ သူတို့ကိုပယ်ဖျက်သလဲဆိုတာ အများပြည်သူသိခွင့်မရှိတဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါအပြင် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေးဆက်ပြီးချိုးဖောက်နေတဲ့ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အမည်စာရင်းတွေကိုလည်း ထပ်တိုးပြီး ထုတ်ပြန်သင့်တယ်လို့ မြင်ကြောင်း Dave Matheison ကပြောပါတယ်။
“ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဟာ အမည်မည်း စာရင်းထပ်ပြီး တိုးတယ် ဆိုတာမျိုးဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ အလုပ်ဖြစ်တဲ့ မူဝါဒအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေးကို စနစ်တကျချိုးဖောက်နေသူတွေ ဒါမှမဟုတ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုနှောင့်ယှက်နေသူတွေရဲ့ အမည်စာရင်းတွေကို ဖေါ်ပြသင့်တာပါ။”
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလက SDN အမည်မည်း စာရင်းကနေ ပယ်ဖျက်ခံရသူတွေ စာရင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ထင်ရှားတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဝင်းအောင်ရဲ့အမည်ကို ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။
ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးရဲ့ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းကို တုန့်ပြန်တဲ့ စာမှာတော့ အမေရိကန် အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်းပြောင်းလဲရေးကို ဆက်ပြီး အကူအညီပေး သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ နိုင်ငံတွင်းပြောင်းလဲတဲ့ အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီး တုန့်ပြန်ဖို့အတွက် နောက်ထပ် အမည်မဲစာရင်းတွေတိုးတာ ဒါမှမဟုတ် ပယ်ဖျက်တာမျိုးတွေ ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလက SDN အမည်မဲစာရင်းထဲ ထပ်တိုးဖေါ်ပြခဲ့ရသူတွေထဲမှာ လက်ရှိအာဏာရ ကြံခိုင်ဖွံဖြိုးရေးပါတီအတွင်း သြဇာကြီးမားသူ တဦးဖြစ်ပြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်သောင်း ကို ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို အားနည်းအောင် အကြမ်းဖက် ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုတွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ဆောင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အင်ကြင်းနိုင် / ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း)
ပုဒ်မ ၅၉(စ)ကို မပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် သူတို့ပါတီက ရွေးကောက်ပွဲမှာ အပြတ်အသတ်အနိုင်ရမယ်ဆိုရင် သမ္မတလောင်းတင်မြှောက်ဖို့ကိစ္စ ပြည်သူလက်ခံနိုင်မယ့် အစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်သွားမယ်လို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
လာမယ့် ၂ဝ၁၅ နိုဝင်ဘာ ၈ရက်မှာကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD အနေနဲ့
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေရဲ့ မဲဆန္ဒနယ်မြေစုစုပေါင်းဖြစ်တဲ့ မဲဆန္ဒနယ်မြေပေါင်း ၁၁၅၈ခုမှာ ဝင်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ နေရာပေါင်း ၃၃ဝ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ နေရာပေါင်း ၁၆၈နဲ့ ပြည်နယ်တိုင်းလွှတ်တော်တွေမှာ နေရာပေါင်း ၆၆ဝရှိပါတယ်။
(ဓာတ်ပုံ – သိမ့်သိမ့်ဇော်ထွန်း/ကမာရွတ်မီဒီယာ)
ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီချုပ်က လွှတ်တော်၂ရပ်ထဲ.. ၆၇%နှင့်အထက်မဲ/ခုံ လွှတ်တော်တခုစီအတွက်အနိုင်ရရင်.. ဒုတိယသမ္မတ၂ယောက်တင်ခွင့်ရှိတယ်…။
တပ်က ၂၅% ကဒုတိယသမ္မတတယောက်တင်ခွင့်ရှိတယ်…။
အဲဒီဒုတိယသမ္မတ ၃ယောက်ထဲက ၁ယောက်ကို သမ္မတအဖြစ် လွှတ်တော်ကပဲ မဲနဲ့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်..။
ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်.. ၂၀၁၆မှာ မြန်မာသမ္မတအဖြစ်မြင်ကြရမယ့်သူက.. အပေါ်ကဓာတ်ပုံထဲကတယောက်ယောက်ပဲ..။
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says:
ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် အပေါ်က ပုံထဲက တစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်မယ်
၂၀၁၆ သမ္မတလို့ မြင်ရမယ့် လူကတော့ ပုံထဲမှာ ကျနော်အမြင်ရမပါဘူးဆိုတော့…
ဟိုတနေ့က ပဲ ဆရာဇင်ယော်နီ ဟောသွားသလို..
ထီပေါက်ပြီး ထီလက်မှတ်ပျောက်သလို ဖြစ်တွားရင်….
၁၉၉၀ တုံးကလည်း တခါ ထီပေါက်ပြီး..လက်မှတ်ပျောက်…
ပုံမှန်အတိုင်းဆို.. ဒေါ်စုလည်း.. အဖေ့လမ်းလိုက်ဖို့.. နီးလာသပေါ့..။
ဗမာလူမျိုးက.. အင်မတန်.. ကွိကွ..များတာ…
ဒီတစ်ခါ မှ သူတို့ ဘဲ အာဏာမြဲ နေရင်တော့ ဒါဟာ လူအများစု တွေ ရဲ့ စိတ်ဓာတ် ကြောင့် နိုင်ငံ ပျက်နေတာ လို့ ဘဲ ပြောတော့ မယ်။
သူကြီး ပြောနေကျ စကား ဘဲ ပြန်သုံး ကြစို့။
မင်းလမ်း ရခိုင်မုန့်တီဆိုင်လည်း တန်းစီရတာပဲ…
ELEVEN MEDIA GROUP ၏ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်၏ ယာဉ်အား လူငါးဦးပါဝင်သောအဖွဲ့က ဦးချစ်မောင်လမ်းနှင့် မင်းလမ်းထောင့်တွင် စောင့်ဆိုင်း၍ သေစေနိုင်သော ကုန်းသီးဖြင့် ၂ပေခန့်အကွာမှ အနီးကပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လုပ်ကြံမှု ညနေ ၆နာရီ ဝန်းကျင်ခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လုပ်ကြံသူများသည် ယာဉ်ကြောပိတ်မိနေစဉ် တစ်ဖက်ယာဉ်ကြောမှ အငှါးယာဉ်ဖြင့် စောင့်ဆိုင်းပြီး CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်၏ ဦးခေါင်းအား အနီးကပ်ချိန်ရွယ် ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကားမှန်ထိခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင် မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
ဂဌုန်ဦးစောကို အဲလို.. ချောင်းလုပ်ကြံဖူးတယ်..။
နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်.. ဦးစောက.. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလုပ်ကြံခိုင်းတာလို့ သံသယတွေနဲ့ထင်…
အဲဒီကနေ… အာဇာနည်နေ့ဖြစ်လာတာပဲ…။ သမိုင်းဘီးဆိုတာ.. လည်(တတ်)ပါတယ်..။
အားလုံး.. အင်မတန်သတိထား.. သမိုင်းသင်ခန်းစာယူသင့်လှတယ်…။
သံသယတွေနဲ့အားလုံးရှုပ်ကုန်တတ်သမို့… အခုကိစ္စရဲ့လက်သည်ကို… ရအောင်ရှာ..ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပစ်ပေးသင့်တယ်..
News Watch(စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်) added2new photos.
ELEVEN မီဒီယာဂရုပ် CEO ၏ မော်တော်ယာဉ်ကို တိုက်ခိုက်သူ ၂ ဦး ၂၄ နာရီအတွင်း ဖမ်းဆီးရမိ
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၁၅
၁၄.၇.၂၀၁၅ ရက်နေ့ ၁၇၅၀ အချိန်ခန့်တွင် ELEVEN MEDIA GROUP ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင်မှ ၎င်းသည် LEXUS ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်
ဖြင့် ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဦးချစ်မောင်လမ်းအတိုင်း တာမွေအ၀ိုင်းဘက်မှ
ပြည်ထဲရေးမီးပွိုင်ဘက်သို့ မောင်းနှင်လာစဉ် ဦးချစ်မောင်လမ်းနှင့် မင်းလမ်း
ထိပ်အရောက် လမ်းတစ်ဘက်မှ အမျိုးသား ၂ ဦးက ယာဉ်အနီးသို့ ရောက်ရှိ
လာပြီး လေးခွကုန်းသီးဖြင့် ၆ ချက်ဆင့်ပစ်၍ တစ်ဘက်ယာဉ်ကြောတွင်
ရပ်ထားသော 5D —- CALDINA ယာဉ်ပေါ်သို့ ထက်ရောက်မောင်းနှင်
ထွက်ပြေးသွားခဲ့သဖြင့် ၎င်း၏ယာဉ်ရှေ့ဝဲဘက်တံခါးမှန်ကို (၄)ချက်ထိမှန်ပြီး အက်ကွဲခဲ့၍ တန်ဖိုးငွေကျပ်သိန်း(၂၀)ခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းနှင့် ယင်းသို့
ကျူးလွန်ကြသူများအား အရေးယူပေးရန် တိုင်တန်းခဲ့သဖြင့် ဗဟန်းမြို့မရဲစခန်း
(ပ)၃၀၇/၂၀၁၅၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၀၇/၄၂၇/၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ စုံစမ်းဆောင်ရွက်
အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
ရုံး၊ ဗဟန်းမြို့မရဲစခန်း၊ သာကေတမြို့မရဲစခန်းတို့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သော
ပူးပေါင်းအဖွဲ့က စုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီး မောင်းနှင်ထွက်ပြေး
သွားသည့် 5D—- CALDINA ယာဉ်မှာ သာကေတမြို့နယ်နေသူပိုင်ဖြစ်
ကြောင်းသိရှိရပြီး ၎င်းယာဉ်အား တီကောင်(ခ)ရန်နိုင်မှ အငှားမောင်းနှင်နေ
ကြောင်းသိရှိရ၍ စုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ရာ ၁၄.၇.၂၀၁၅ ရက်နေ့ ၂၁၂၀ အချိန်ခန့်တွင်
သာကေတမြို့နယ်၊ မြို့မ(၈)လမ်း၌ တီကောင်(ခ)ရန်နိုင်၊ (၂၈)နှစ်၊ ဘုရားကုန်း
ကျေးရွာ၊ သန်လျင်မြို့နယ်နေသူကို ယာဉ်နှင့်အတူ တွေ့ရှိဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်။
၎င်းအားစစ်ဆေးချက်အရ ခင်မင်ရင်းနှီးသူ စပိုက်ဒါ(ခ)အငယ်လေး(ခ)
မျိုးမြင့်အောင်မှ ငှားရမ်းသဖြင့် လိုက်ပါလာခဲ့ပြီး ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဦးချစ်မောင်
လမ်းရှိ အခင်းဖြစ်နေရာအနီးသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းနေရာသို့ရောက်ရှိ
စဉ် စပိုက်ဒါ(ခ)အငယ်လေး(ခ)မျိုးမြင့်အောင်မှ အခြားသူတစ်ဦးအား ဖုန်းဖြင့်
ဆက်သွယ် အသိပေးခဲ့ရာ လူငယ်(၂)ဦးရောက်ရှိလာပြီး ဦးချစ်မောင်လမ်း
ပေါ်ရှိ ယာဉ်တစ်စီးအား လေးခွဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း၊ မျိုးမြင့်အောင်(ခ)
အငယ်လေးမှ ယာဉ်ကို စက်အသင့်နှိုးခိုင်းထားပြီး ၎င်းလူငယ်(၂)ဦး
အမှုတွင်ပါဝင်ကျူးလွန်သူ စပိုက်ဒါ(ခ)အငယ်လေး(ခ)မျိုးမြင့်အောင်၊ (၂၇)နှစ်၊
(၃)ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်နေသူအား မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တည်းခိုခန်းတစ်ခုမှ ၁၅.၇.၂၀၁၅ ရက်နေ့ ၀၈၀၀ အချိန်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး
အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်ရှိသော ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား ဖမ်းဆီးရမိရေးေ
ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လေးခွ ကုန်းသီးဖြင့်ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်သည့်
အမှုအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ အချိန်တိုအတွင်း ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
“ကျူးလွန်သူအချို့ကို ညတွင်းချင်း ဖမ်းဆီးရမိအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Yangon Police မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ယာဉ်ရှေ့ တံခါးမှန် လေးချက်ထိမှန် အက်ကွဲပြီး ငွေကျပ်သိန်း ၂၀ ခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့လို့ ကျူးလွန်သူတွေကို အရေးယူပေးဖို့ တိုင်ကြားခဲ့တယ် ဆိုတာနဲ့ လေးခွနဲ့ ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်တဲ့အမှု ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်ကန့်ကွက်တယ်။ အခုကိစ္စက လေးခွနဲ့ချောင်းပစ်လို့ အမှုဖွင့်တာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ လူမြင်ကွင်းမှာ ကြိုတင်ကြံစည်မှုနဲ့ လူသတ်ဖို့အထိ လုပ်ဆောင်တာပါ။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ညနေပိုင်းအချိန် လူမြင်ကွင်း လင်းလင်းထင်းထင်းမှာ ဥပဒေမဲ့ အကြမ်းဖက်တာပါ။ တကယ်တော့ ကျွန်တော့ကို အခုလို လုပ်ကြံဖို့ လူ ၁၀ ဦးထက်မနည်း ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော့ကားကို သိဖို့ ပြန်လေ့ရှိတဲ့လမ်းတွေကို သိဖို့ အချိန်တော်တော်ယူမှ ရလိမ့်မယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လ ၃ လလောက်ကတည်းက လူမိုက်ဂိုဏ်းတွေနဲ့ အုပ်စုဖွဲ့ လုပ်ကြံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ကြိုတင်ရရှိထားလို့ ကျွန်တော်တို့ သတိထားပြီး နေခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က ကားတစ်စီးတည်းကို ပုံသေစီးလေ့ မရှိပါဘူး။ အခုဟာက လူသတ်ဖို့ ကြံစည်တာပါ။ ကားမှန်မကွဲခဲ့လို့ပါ။ ကားမှန်သာ ကွဲခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်သေပြီ။ မနေ့က ကျွန်တော့်ကို လုပ်ကြံတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ ကားစထွက်လာတာကို သတင်းပေးတဲ့သူ၊ ကြိုစောင့်နေတဲ့သူတွေအပြင် ကျွန်တော့်ကားအနောက် ဒါမှမဟုတ် အရှေ့နားမှာ လိုက်ပါပြီးမှ ချိန်သားကိုက် အကွက်ချ လုပ်တဲ့သဘောပါ။ ကျွန်တော့်ကို ပစ်ခတ်တဲ့အချိန်မှာ အသေသတ် ဆိုပြီး လက်ညှိုးထိုး အော်ဟစ်ပြီး အနီးကပ် ပစ်ကြတာ။ ကားမှန် ခံနေတာကြောင့်ရယ်၊ အပစ်ခံရတဲ့ အချိန်မှာ ကားကို ညာဘက်ဆွဲလှည့်လိုက်ပြီး လူကလည်း ညာဘက်အခြမ်းကို ထွက်လိုက်နိုင်လို့ အန္တရာယ် မဖြစ်တာပါ။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမ္မတဆီကို စာပို့အသိပေးသွားပါမယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လုံခြုံရေး အခြေအနေဟာ ဘယ်လောက်ထိ အန္တရာယ်ရှိနေသလဲ ဆိုတာ ဒီဖြစ်စဉ်က သက်သေပါ။ ရန်ကုန်မြို့မှာ နေရာတိုင်း ကားကြပ်နေတယ်။ ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဘယ်သူ့ကိုမဆို စထွက်လာတဲ့နေရာက စောင့်ပြီး သတင်းပေးမယ်၊ ကားပိတ်မယ့်နေရာမှာ အုပ်စုလိုက် ရန်ရှာပြီး အလွယ်တကူ သတ်ဖြတ် လုပ်ကြံခံရနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ အခုကိစ္စက သာမာန်ဖြစ်စဉ်လို့ မယူဆဘူး။ နောက်ကွယ်က အဓိက ပါဝင်နိုင်တဲ့ ငွေကြေးနဲ့ သြဇာတိက္ကမ ရှိတဲ့ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ ဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်ကွယ်က အဓိက လူတွေကို မဖော်ထုတ်နိုင်ဘဲ ကျူးလွန်တဲ့ လူမိုက်တွေကို အရေးယူလိုက်ရုံနဲ့ မပြီးဘူး။ နောက်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ သူတို့ရဲ့ သားသမီး မြေးတွေ မိသားစုဝင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးအရ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေ၊ ထင်ရှားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ၊ အခြားသော ထင်ရှားကျော်ကြားသူတွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာနေတဲ့ ဘယ်ပြည်သူမဆို အသက်အန္တရာယ်အတွက် အချိန်မရွေး ခြိမ်းခြောက်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတာကို အဓိက သတိပြုစေချင်တာပါ။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လုံခြုံရေးက စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပြီ။ ကျွန်တော့်ဖြစ်စဉ်မှာ မိနစ် ၂၀ ကျော်တဲ့အထိ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ မရောက်လာနိုင်ဘူး။ အားလုံးဟာ လမ်းမပေါ်မှာ လုံးဝစိတ်မချရတော့ဘူးဆိုတာကို သိစေချင်တယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လူမြင်ကွင်းမှာ နေ့ခင်းကြောင်တောင် လက်ရဲ ဇက်ရဲ ကျူးလွန်မှုတွေ ဖြစ်လာတာကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ မဟန့်တားနိုင်ဘူးဆိုရင် ဝမ်းနည်းစရာ အဖြစ်ဆိုးတွေ ထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ကျွန်တော်ပြောချင်တာ ဒါပါပဲ။” ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်က ပြောသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ Eleven Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်၏ ယာဉ်အား လူငါးဦးပါဝင်သောအဖွဲ့က ဗဟန်းမြို့နယ် ဦးချစ်မောင်လမ်းနှင့် အာဇာနည်လမ်းထောင့်တွင် စောင့်ဆိုင်း၍ သေစေနိုင်သော ကုန်းသီးဖြင့် နှစ်ပေခန့်အကွာမှ အနီးကပ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လုပ်ကြံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လုပ်ကြံသူများသည် ယာဉ်ကြောပိတ်မိနေစဉ် တစ်ဖက်ယာဉ်ကြောမှ အငှားယာဉ်ဖြင့် စောင့်ဆိုင်းပြီး CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်၏ ဦးခေါင်းအား အနီးကပ် ချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကားမှန်ထိခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယာဉ်အရှေ့ရှိ အခြားယာဉ်တစ်စီးအား တိုက်မိမှုဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ ကားမှန်ခံနေသောကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ မရရှိခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
၎င်းတို့အား ပြောင်းလဲ အမှုဖွင့်ထားသည့် ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၇ မှာ ပြုလုပ်မှု တစ်ခုခုကို ပြုရာတွင် သေခြင်းကို ဖြစ်စေခဲ့သော လူသတ်မှု မြောက်နိုင်မည့် ကြံရွယ်ချက်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ထိုကဲ့သို့သော (ပြုလုပ်မှု တစ်ခုခုကို ပြုရာတွင် သေခြင်းကို ဖြစ်စေခဲ့သော လူသတ်မှု မြောက်နိုင်မည့်)ပတ်ဝန်းကျင် အကြောင်းအခြင်းရာဖြင့် လည်းကောင်း၊ မည်သူမဆို ပြုလုပ်မှု တစ်ခုခုကို ပြုလျှင် ထိုသူကို ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိ တစ်မျိုးမျိုး ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်အနေနဲ့လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ထိုပြုလုပ်မှုဖြင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်သော နာကျင်စေလျှင် ထိုသူကို တစ်သက်တစ်ကျွန်းဒဏ် ဖြစ်စေ၊ အထက်ကဆိုခဲ့သော ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။ /blockquote>
တသီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ညိုညိုသင်း NLD မှ ဝင်ပြီး ပြိုင်မယ် လို့ သိလိုက်တယ်။
. ဒေါ်ညိုညိုသင်းလို ထက်မြက်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် လုပ်နေသူ တစ်ယောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်လို့ အမြဲ တွေးမိတာပါ။
ဒါဟာ တကယ်တော့ NLD အတွက် အား လို့ ပြောတာထက် တိုင်းပြည်လူထု အတွက် အားပါ။
. ကျေးဇူး အလွန်ဘဲ တင်ပါတယ်။
သတင်း အမှန်ဟုတ်ပါစေ ဆုတောင်းပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးအောင်သောင်း နာရေးအိမ်သွားရောက်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဦးအောင်သောင်းရဲ့ နာရေးအိမ်ကို သွားရောက်ပြီး ကျန်ရစ်သူ မိသားစုကို အားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဓာတ်ပုံအရဆိုရင်တော့ ဦးအောင်သောင်းရဲ့ ရုပ်အလောင်းဟာ နေအိမ်မှာ ရောက်ရှိ ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဓာတ်ပုံကလည်း Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာ ပျှံ့နှံ့လာတဲ့ပုံဖြစ်ပြီး မူရင်း ရိုက်ကူးထားသူ ဘယ်သူဆိုတာ မသိရှိရပါဘူး။ ဒီဓာတ်ပုံက Thaw Zin Ohn Facebook ကတဆင့် စတင် ပျံ့နှံ့လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ အဖြစ်က ဘာယုံလို့ ယုံရမှန်းမသိဖြစ်နေပါတယ်
အစိုးရကလဲ သတင်းအမှန်မထုတ် သူတို့ထုတ်ချင်တာဘဲထုတ်
မီဒီယာမှာလဲ လေးစားယုံကြည်ရလောက်တဲ့သတင်း နည်းသထက်နည်းလာ
ဖဘမှာ စတေးတပ်နဲ့တင်လိုက်တဲ့သတင်းတွေကလဲ တစ်ခါတစ်လေအမှန်
တစ်ခါတစ်လေအ မှား ဘာယုံလို့ ယုံရမှန်းမသိ
အလဲဗင်း က ဦးသန်းထွဋ်အောင် ဘတ်ခွနဲ့ပစ်ပြီးလုပ်ကြံခံရ
ကျနော်တို့က ဘယ်သူ့ သတင်းကိုယုံကြည်ရတော့မယ်ဆိုတာ မဝေခွဲနိုင်တော့
ချင့် ယုံ ကြရပါတော့မယ်
လူကုန်ကူးမှုအဆင့် ၂ အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ သတ်မှတ်ခံရ
မြန်မာနိုင်ငံဟာ လူကုန်ကူးမှု အဆင့် ၂ စောင့်ကြည့်ရမယ့်နိုင်ငံအဖြစ် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ၂၀၁၅ လူကုန်ကူးမှု အစီရင်ခံစာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀ နဲ့ ၂၀၁၁ တွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ လူကုန်ကူးမှု အဆင့် ၃ နေရာမှာ သတ်မှတ်ခံထားရတာပါ။
၂၀၁၂ နောက်ပိုင်းမှာတေ့ အဆင့် ၂ စောင့်ကြည့်ရမယ့် နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ခံ ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ကလေးနဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ထုိုင်း၊ တရုတ် နဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအပါအဝင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ အမေရိကတွေကို ကုန်ကူးခံနေရတယ်လို့ အစီရင်ခံမှာ ဖော်ပြထား ပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေဆုိုရင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုန်ကူးမှုခံရတာ အမျိုးသားယောက်ျားတွေက စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေနဲ့ ပင်လယ်ပြင်က ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာ အဓမ္မအလုပ်စေခုိုင်းခံရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ လူကုန်ကူးမှုတွေကို အခုထက်ထိရောက်တဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိဖုို့ လုိုတယ်လို့လည်း ဆုိုပါတယ်။
အဆင့် ၂ စောင့်ကြည့်တဲ့ နိုင်ငံတွေအထဲမှာ မြန်မာအပြင် လာအုို၊ မလေးရှား၊ ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ အဆင့် ၃ နေရာမှာ ရှိပါတယ်။
ရေဆင်၊ တောက်တဲ့ အလိမ်ရှင်းတမ်း
လောကမှာ လိမ်ပုံလိမ်နည်းတွေ အများကြီး ရှိတယ်၊ ယုံလွယ်၊ အားနာတတ်ပြီး အတွေ့ အကြုံနည်းသေးတဲ့ သူဆိုလိမ်ခံရတယ်၊ ဘဝကို ပြောင်းလဲချင်တဲ့စိတ် ပြင်းထန်တဲ့ သူတွေဆို အဲစိတ်က လွှမ်းမိုးနေတော့ ပိုလိမ်ခံရတတ်တယ်၊ ကောင်းတော့ ကောင်းပါတယ်၊ အောင်မြင်ဖို့အတွက် ဒီလိုအတွေ့ အကြုံတွေ လိုတယ်၊ဒါတွေက ကျောင်းမှာ မသင်ရဘူး၊
လွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်က ရေဆင်ပုံလေး fb မှာတွေ့ လိုက်တော့ ရေးချင်စိတ်လေး ပေါ်လာလို့ရေးလိုက်ပါပြီ၊
ဒီဈေးကွက်ကို တော်ရုံလူဗဟုသုတ ရှိခဲတယ်၊ဒါကြောင့်လဲလိမ်လို့ ကောင်းတယ်၊ ထူးခြား စွမ်းရည် ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ တိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းတွေ နဲ့တည်ဆောက် ထားတယ်၊ ယုံချင်စရာ ဖြစ်တတ် တယ်၊ ဈေးနှုန်းလေးတွေ ကြားရင် ညအိပ်လို့တောင်မပျော်ဘူး၊ မယုံစရာ ဈေးတွေမို့ ၊ သိန်းတစ်သောင်းတို့ ၊ သိန်းတစ် သိန်းတို့ ပေါ့၊
၃၊ ဝက်စွယ်ပိတ်၊ အမတေ၊ မာန်စွယ်အမျိုးမျိုး
၁၀၊ ပြဒါးယို၊ ပြဒါးငုပ်
မှတ်မိသလောက် ကောက်ရေးတာ၊ ဘာပစ္စည်း ဖြစ်ဖြစ် ထူးခြားဆန်းကြယ်ဆို ဒီဈေးကွက် မှာလုပ်စားလို့ ရတယ်၊ အဲဒါအကုန် အလိမ်တွေပဲ၊ ရေဆင်စွယ် အကြောင်း နမူနာ ရေးပြပါ့မယ်၊ လုပ်စားနည်းလေး ကလည်း ပညာပါတယ်၊ လုပ်စားနည်းလေး မရေးခင် ရေဆင်စွယ် အကြောင်းအရင် ရှင်းပါ့မယ်၊
ရေဆင်စွယ်ဆိုတာ ဂမ္ဗီရ ပစ္စည်းတစ်မျိုး၊ ရေထဲမှာ နေတဲ့ ဆင်ပုံစံ အသေးစားသတ္တဝါ သေသွားတာကို အခြောက်ခံထားတာ၊ ဆင်တွေကိုနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်၊ ရေဆင်စွယ် စစ်မစစ် စမ်းနည်းအများကြီး ရှိတယ်၊ အဓိက ၂ နည်းကတော့ ဆင်သွားလမ်းမှာ ချထားတယ်၊ ဆင်ကိုဆင်ဦးစီးက အဲလမ်းကိုဖြတ် ခိုင်းရင် မရတော့ဘူး၊ နောက်ဆုတ်ပြေးတယ်၊ ဒါက ပထမနည်း၊ ဒုတိယနည်းက ဌက်ပျောမတက် လို့ခေါ်တယ်၊ ရေဆင်စွယ်ကို ဌက်ပျော ပင်စည် ရဲ့ အလယ် လောက်မှာ အရင်စိုက်၊ ပြီးရင် ဒီအစွယ် စိုက်ပြီးသား အပေါ်ကနေ ပင်စည်ကို ဓားနဲ့ခုတ်ပိုင်းလိုက်တော့၊ ၄၅ မိနစ် သို့၁ နာရီ စောင့်ကြည့်၊ အလည်အူတိုင် က အတက်ထွက် မလာရင် စစ်တယ်ဆိုတယ်၊ သဘာဝ အတိုင်း ဆို မိနစ် ၂၀ လောက်ဆိုရင် ထွက်လာ ပါတယ်၊ ပထမနည်းက ဆင်ရှာရတာ ခက်ခဲတဲ့အတွက် ဌက်ပျောမတက်နည်း ကိုပဲ အများဆုံး စမ်းကြတယ်၊ မိုးကြိုးသွား စမ်းရင် လည်း ဌက်ပျောမတက်နည်း သုံးကြပါတယ်၊
ကဲလုပ်စားပုံလေးစပြီ၊ လိမ်မယ့်သူက ရန်ကုန်မှာ အခန်းလေး တစ်ခု ငှားရတယ်၊ နည်းနည်း Decoration လေးလုပ်၊ အဓိက ကဧည့်ခန်းပဲ၊ သားနားရမယ်၊ ဥပတိရုပ် ကောင်းတဲ့လူဆို ပိုကောင်းတယ်၊ လိမ်မယ့်သူက Mr A ဆိုပါစို့ ၊ သတင်းလေး တစ်ခု လွှင့်လိုက်တယ်၊ နိုင်ငံခြားမှာ ဒါမျိုးတွေကို ဝယ်တဲ့သူဌေးကြီး တစ်ယောက် ရှိတယ်၊ သူကအဲဒီ သူဌေးရဲ့ လူယုံ၊ ဒီပစ္စည်းမျိုး ရှာခိုင်းတယ်၊ ငွေကတော့ စိတ်မပူနဲ့ ဆိုပြီး မောင်ကကြီးရယ်၊ မောင်ခခွေးရယ်၊
မောင်ဂငယ် ရယ်ကို လူခွဲတွေ့ ပြီး သတင်းဖြန့် လိုက် တယ်၊ သူတို့ အချင်းချင်းမသိဘူး၊Mr A ကသူ့ နာမည်ကို မတူအောင်သုံးမျိုး သုံးတယ်၊ ဒီသုံးယောက်ကတော့ အဲဒီည အိပ်မပျော် ကြဘူး၊ ကြားရတဲ့ဈေးက သိန်း ၁၅၀၀၀ တဲ့၊ နောက်နေ့ ကနေ စပြီး ရှိသမျှ အလုပ်ဖျက် လိုက်ရှာကြရော၊ ချက်ချင်း ဘ၀ပြောင်းမှာကိုး၊
နယ်တနယ်က ဒီပစ္စည်း ပိုင်ရှင် တစ်ယောက်နဲ့မောင်ကကြီး ကပထမဆုံး အဆက်အသွယ် ရတယ်၊ ဘယ်လောက် ရောင်း မလဲမေးတော့ ပိုင်ရှင်က သိန်း ၂၀၀ လောက်ရရင် ရောင်းချင်တယ် ပြောတယ်၊ ကဲ သိန်း ၂၀၀ နဲ့သိန်း ၁၅၀၀၀ ကြားကခြားနားချက်၊ စဉ်းစားသာ ကြည့်တော့၊ နှလုံးမကောင်း ရင်သေလောက်တယ်၊ မောင်ကကြီး က လောဘစိတ် မပေါ်အောင် မျိုသိပ်ပြီး ပစ္စည်းစစ် ရင် တော့ ပေးမှာပေါ့ဆိုပြီး ပြန်ဖြေတယ်၊ ပိုင်ရှင် ကလည်း စစ်တယ်ပေါ့၊ ခုန စမ်းနည်းနှစ်မျိုး လုံး ကြိုက်သလိုစမ်း၊ ရတယ်၊ သူ့ ဆီလာပြီးစမ်းလို့ဆိုတယ်၊ ဒီတော့ Mr A ကိုပြန် တင်ပြတော့ သူက ဒါမျိုးတွေရိုးနေပြီ၊ မစစ် တာများတယ်၊ ခရီး စရိတ်ပဲဆုံးတာ၊ အလုပ်လဲ ပျက်တယ်၊ဒီတော့ငွေ အပေါင်မတင်ရင် မလိုက်ဘူး ဆိုတယ်၊ ငွေအပေါင်တင် ဖို့ က အနည်းဆုံး ၁၀ သိန်းနဲ့ ခရီးစရိတ် Mr A ကိုငွေပေးခဲ့ရမယ်၊ စာချုပ် ချုပ်မယ်၊ ပစ္စည်းစစ်ရင် သိန်း ၁၅၀၀၀ ပေးဝယ် မယ့်အပြင် ငွေပေါင်တင်တာရဲ့သုံးဆ လျော်မယ်၊ စစ်လို့ မဝယ်နိုင်ခဲ့လည်း သုံးဆ လျော်မယ်၊ မစစ်ရင်တော့ ငွေအပေါင် အဆုံးဆိုပြီး ချုပ်မယ်ပြောတယ်၊ ပိုင်ရှင် ကိုပြန်ပြောပြတော့ ပိုင်ရှင်ကမလိုက်နိုင်ဘူး၊ ငွေလဲမရှိလို့ အပေါင်လဲမတင် နိုင်ဘူးလို့ ဖြေတယ်၊ ဒါနဲ့အရောင်းအဝယ် က ပျက်မလိုဖြစ် နေပြီ၊ ဒီတော့ မောင်ကကြီး မှာ စားရခါနီး လွတ်တော့မလို ဖြစ်နေတော့ ရန်ကုန်လိုက်ခဲ့ပါ၊ စရိတ် သူစိုက်ပါ့မယ် ဖြစ်ရော၊ ပိုင်ရှင်ကလည်း လိုက်မယ် သဘော တူတော့ Mr A ကို ရန်ကုန်လာမယ်ဆိုပြီး ဖုန်းပြန်ဆက်တယ်၊
Mr A ကဘာပြောပြန်လဲ ဆိုတော့ ရန်ကုန် လာလည်း လိုက်မကြည့် နိုင်ဘူး၊ အလုပ်ပျက်တယ်၊ ငွေအပေါင်တင်မှ အလုပ်လုပ်မယ်၊ မပါရင်မဆက်သွယ်ပါနဲ့ တော့ ခပ်တင်းတင်းဆိုတယ်၊ ငွေအပေါင် ပါ စိုက်ပြီး ခေါ်သင့်မသင့် စဉ်းစားနေတုန်း ပစ္စည်းပိုင်ရှင်ရဲ့အသိ တစ်ယောက်က မောင်ခခွေး ကိုခေါ် လာပြန် ရော၊ဘယ်လောက် ရောင်းမလဲ ဆိုတော့ မောင်က ကြီးနဲ့ ပြောထားတာ သိန်း ၂၀၀လို့ ပြောရော၊ မောင်ခခွေး က”ဟာနည်း တာပေါ့ ကျုပ်သူဌေးက သိန်း ၅၀၀ ပေးမယ် ပြောပီ” ၊ ဟော မောင်ဂငယ်နဲ့ လည်း အဆက်အသွယ်ရပြီ ၊ “ဒီနှစ်ယောက်လုံးထက် ကျုပ်ပိုပေး မယ်ဖြစ်လာရော”၊ အားလုံး က အပြိုင် အဆိုင်တက်ပေး ကြပြီ၊ ငွေအပေါင်ကို အပြိုင် အဆိုင် စိုက်ပေးကြမယ် ဖြစ်ကုန်ပြီ၊ မစိုက်လို့ လဲ မဖြစ်ဘူးလေ၊ ပြိုင်ဘက်ပေါ် လာပြီ၊ ဒီအခွင့်အရေး ဆုံးသွားမှာဆိုတဲ့ လောဘက ဝင်သွားပြီ၊ ဘာမှမမြင်တော့ဘူး၊ စိုက်တာရဲ့ သုံးဆ ပြန်ရမယ် ဆိုတဲ့မက်လုံး ကလည်း ရှိပြန်တယ်၊ ကဲဒီတော့ ကကြီး၊ခခွေး၊ ဂငယ်သုံး ယောက် ထဲက ဆုံးဖြတ်ချက်မြန်တဲ့ တစ်ယောက်က Mr A ဆီသွား ငွေပေါင်တင်၊ စာချုပ်ချုပ်ပြီး ရန်ကုန် ခေါ်လာတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ပစ္စည်း ရှိတဲ့ နယ် ကိုခေါ်သွားပြီ၊ စမ်းကြပြီ၊ ကဲဘာ ဆက်ဖြစ် ကြမလဲ၊
ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျ၊ သိန်းသောင်းချီတဲ့ အရောင်း အဝယ်လဲမဖြစ်ပါဘူး၊ စမ်းကြည့် တယ်၊ မအောင်ပါ ဘူး၊ ဘယ်တော့မှလည်း မအောင်ဘူးဗျ၊ ပစ္စည်းပိုင် ရှင်လည်း သူ့ ပစ္စည်း မစွမ်းတာကို ဝမ်းနည်းပက်လက်ငိုပြီး ပြန်သွားပြီ၊ကြားကငွေစိုက်တဲ့သူ က တော့ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ငွေအပေါင် ဆုံးတာပေါ့ဗျာ၊ဘာကြောင့်လဲ သိလား၊
အဲဒီ ငိုပြသွားတဲ့ ပစ္စည်းပိုင်ရှင်နဲ့ ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ Mr A ကသူငယ်ချင်း ဗျ၊ အရမ်းခင်တာ၊ အတူပေါင်းကြံတာ၊ ဒါဆို မိတ်ဆွေတို့ နားလည် လောက်ပါပြီ၊
တပွဲ ပြီးရင်တော့ နောက်လူသစ်တွေကို ထပ်လိမ်တာပေါ့ဗျာ၊ တရားစွဲလို့့လဲ မရဘူးဗျ၊ စာချုပ်ကအပိုင် ချုပ်ထားတာ၊
ကျန်တဲ့ပစ္စည်းအားလုံးဒီပုံစံမျိုးကို လှည့်သုံး တာပါပဲ၊ စမ်းပုံစမ်းနည်းမတူကြဘူး၊ လက်ပံခါး ဆို သံစိုက် စမ်းတယ်၊ ကြေးခြစ်ပိတ် ဆို သံနဲ့ ခြစ်ပြီး စမ်းတယ်၊ ပန်းကန်ပြားဆို အရက်ပြန် ထည့် နာရီဝက်အတွင်း ရေဖြစ် မဖြစ်စမ်းတယ်၊ အဆိပ်ထည့်၊ ကြက်ကို ကျွေးပြီး သေမသေ စမ်းတယ်၊ သေချာ တာက အကုန်အလိမ် ချည်း ပါပဲ၊ ငွေအပေါင်လိမ်စား တဲ့စနစ်ပါ၊
တောက်တဲ့ လိမ် နည်း ကတော့ ပိုပညာပါ တယ်ဗျ၊ ပြည်ပကလူတွေပါပေါင်းကြံတာ၊ ထိုင်းနဲ့ အင်ဒို ကကောင်တွေ လုပ်တာများ တယ်၊ Website အတု ပါဆောက်ထားပြီးမှ လိမ်စားတာ၊ တောက်တဲ့နဲ့ တူတဲ့မျိုးစိတ် တစ်ခုကို ကျောက်တောက်တဲ့ လို့ နာမည်ပေး၊ မြဝတီ လမ်းကြောင်း က သွင်းပြီး ရောင်းမယ် သတင်း ဖြန့် ၊ တဘက်ကလည်း ဝယ်မယ် သတင်းဖြန့်ပြီးမှ လောဘနဲ့ကြားက စိုက်ဝယ် မယ့် သူကို ထောင် ဖမ်းပြီးအဆင့်ဆင့် လက်ပြောင်း ဝယ်ခိုင်းတာ၊ ပြီးမှ အဝယ်ဖျောက် လိုက်တော့ သိန်း ၇၀၀လောက် နဲ့ နောက်ဆုံး ဝယ်ထား ခဲ့တဲ့ မြဝတီ၊ ဘားအံ တစ်လျှောက်က လူတွေ အများကြီးခံလိုက်ရပါ တယ်၊ ပြန်ရောင်းရင် သိန်းနှစ်သိန်းလောက် ရမယ် မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ပေါ့၊ ကျွန်တော် မိတ်ဆွေ တွေပါတာပေါ့ဗျာ၊ သူတို့ မှာ အဲဒီ ကျောက်တောက်တဲ့ဆိုတဲ့ အကောင်နဲ့ ခုထိဒုက္ခရောက်တုန်း၊ သေမှာ လည်း ကြောက်ရ၊ ပြန်ရောင်းလို့ လဲမရနဲ့အဲဒီကောင်ကို သူ့အဖေအမေထက်တောင် ဂရုစိုက်နေရတယ်၊ ဒီသတင်းကြောင့် တကယ့်တောက်တဲ့တွေပါ အဖျားခတ်ကုန်ပြီး လိုက်ဖမ်းကြ၊ ၂၀ ကျပ်သားပြည့်မှ ၀ယ်မယ်ဆိုလို့ကြီးအောင်မွေးထားကြနဲ့လူရော၊ တောက်တဲ့ပါ တော်တော် ဒုက္ခရောက်ကြတယ်၊ အားရင်အသေးစိတ် ရေးပြ ပါဦးမယ်၊ ဒဂုံမြေကွက်ကစားတာနဲ့ဆင်ပါတယ်၊
ပစ္စည်းအစစ်တချို့ လည်းရှိပါတယ်၊ တွေ့ ဖူး ပါတယ်၊ ဒီအတိုင်းစမ်းရင် စွမ်းတယ်ဗျ၊ တကယ်ငွေပေါင် တင်ပြီး စမ်းရင် မစွမ်းတော့ ဘူး၊ အကြိမ်ကြိမ် လက်တွေ့ ပါ၊ ဒီလုပ်ငန်း ထဲက ဝယ်တယ်ဆိုတဲ့ လူအားလုံး ဒီလှို့ ဝှုက် ချက်ကိုသိကြပါတယ်၊ ဒါကြောင့် လဲ သိန်းပေါင်း သိန်းဂဏန်းနဲ့ ဝယ်မယ် ပြော ရဲတာပေါ့၊ အာမခံပါတယ်၊ ဘယ်တော့မှ အရောင်းအ၀ယ် မဖြစ်ဘူးဗျ၊
မိတ်ဆွေတို့ ထဲက မသိပဲ ဒီလုပ်ငန်း ထဲ ပါမိနေရင် ရပ်လိုက်ပါတော့၊ ဖုန်းခကုန် တာက လွဲလို့ မထူး စေရဘူး၊ ဖတ်မိတဲ့ မိတ်ဆွေ တွေထဲက ဒီအကြောင်း သိတဲ့သူရှိရင် Comment ရေး သွားပါဗျာ၊အားလုံးသိ သွားအောင်၊
ေ၇ဆင်ပုံကတော့ ဟိုတလောက fb မှာတွေ့ တဲ့ပုံယူသုံးလိုက်ပါတယ်၊၊
အမှတ်မမှားရင်.. ဦးနေ၀င်းကိုလည်း.. လူပျံတော်ပတ္တမြားကတယောက်ယောက်က.. .. ရေဆင်ဆိုပြီး ပေးဖူးတယ်..။
ဟိုက.. ဓတ်မှန်ရိုက်ခိုင်းလိုက်တော့.. ပွဲပျက်ရော..။
အဲဒီတောက်တဲ့ကိုလည်း.. ရွာထဲတင်တော်တော်ပွစိပွစ.. ဖြစ်ကြဖူးတယ်..။
ဟုတ်တယ်နော..။ အခုဘယ်အရွယ်ရှိပြီးလဲ..။ ကင်စားလိုက်ပြီလား..။ သိချင်..။
တခြားအကောင်ဘလောင်အဆန်းကို စိတ်ကူးယဉ်ကြတာ.. ကမ္ဘာနိုင့်ငံတွေတော်တော်များများက.. နိုင်ငံသားတော်တော်များများပါပဲ..။
ဗမာတွေကျမှ.. ဘာပြီးတယ်..ညာပြီးတယ်နဲ့.. ပေါက်တပ်ကရကို သွားယုံတာက..ဆန်း..။
တရုတ်သစ်ခိုးထုတ်သမား ၁၅၀ ကျော်ကို လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်နဲ့အတူ လွှတ်ပေး
တရားမ၀င်သစ်ခိုးထုတ်မှုနဲ့ မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်မှာ ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်း ချမှတ်ခံထားရတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ၁၅၅ ယောက်အပါအ၀င် အကျဉ်းထောင်အသီးသီးက အကျဉ်းသား ၆၉၆၆ ယောက် ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်နဲ့ ဒီနေ့ လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကျဉ်းကျနေသူတွေကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့ နိုင်ငံခြားသံရုံးတွေက အစိုးရကို တောင်းဆို တာကြောင့် ချစ်ကြည်ရေးအတွက် အခုလိုလွှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ ကချင်ပြည်နယ် အကျဉ်းဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းနိုင်လင်းက ပြောပါတယ်။
“ကချင်ပြည်နယ် အကျဉ်းဦးစီးဌာနကနေ လွှတ်ပေးတာ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ အပါအဝင် စုစုပေါင်း အားလုံး ၄၁ဝ ဦးရှိပါတယ်၊ နိုင်ငံခြားသံရုံးတွေကနေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့ ပြောတာလည်းပါတယ်၊ နောက်တစ်ခုက နိုင်ငံ အချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရေးအရလည်းပါပါတယ်၊ ဒါကလည်း တစ်နိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ဆိုရင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ သားတွေ နောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားတွေ၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေလည်းပါပါတယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် မှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံသားချည်းပဲဖြစ်ပါတယ်”
လွတ်မြောက်လာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ၁၅၅ ယောက်ကို မြစ်ကြီးနား-ကန်ပိုက်တီး လမ်းကြောင်းအတိုင်း တရုတ်နိုင်ငံ နယ်စပ်အထိ မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိ လွတ်မြောက်တဲ့စာရင်းတွေ အရ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၃ယောက်လောက် ပါဝင်တယ်လို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအရေး ဆောင်ရွက်နေသူတွေ က ပြောပါတယ်။ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိတဲ့အထဲမှာ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာ သာသနာညှိးနွမ်းစေမှု နဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျနေတဲ့ V Gastro Bar ဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ မန်နေဂျာ ၂ဦး၊ နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှုနဲ့ အကျဉ်းကျနေတဲ့ ဘိုင်မွန်းတည့်နေဂျာနယ်က သတင်းသမား ၅ဦး၊ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးမှာ ထောက်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးတာကြောင့် အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်မှာ အကျဉ်းကျနေတဲ့ ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
တသက်တကျွန်းကျ တရုတ် ၁၅၀ ကျော်ပြန်လွတ်၊ ရှေ့နေဖြစ်သူကို မေးမြန်းချက်
By ရွှေအောင် 30 July 2015
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လွတ်လာသူတွေထဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ကမှ ကချင်ပြည်နယ်ထဲ သစ်ခိုးထုတ်မှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် တသက်တကျွန်း ပြစ်ဒဏ်ချခံရတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ၁၅၅ ဦးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
သစ်ခိုးထုတ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ၁၅၀ ကျော်အမှုမှာ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
သစ်ခိုးထုတ်မှုနဲ့ ထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်း ချခံထားရတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ၁၅၀ ကျော်ကို ဒီနေ့ မြစ်ကြီးနားထောင်က ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်ကြားလို့ပါ။
“မှန်ပါတယ်၊ လွတ်ပါတယ်၊ နိုင်ငံတော်ကနေ ဖွဲ့စည်းပုံ ၂၀၄(က) ဆိုတဲ့အမိန့်နဲ့ လွှတ်တဲ့ထဲမှာ သူတို့ပါတယ်။ ပါတဲ့အတွက် မြစ်ကြီးနားထောင်ကနေ ၁၂ နာရီခွဲမှာပဲ၊ ပြည်နယ် လ၀ကမှူးက ဦးစီးပြီးတော့ ကားကြီးတွေနဲ့ ခေါ်သွားပါပြီ။ အခု ခင်ဗျား ဖုန်းဆက်နေချိန်မှာ မြစ်ကြီးနားကနေ ၁၆ မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ မဒိန်ဆိုတဲ့ ကျေးရွာကိုတောင် ရောက်သွားပါပြီ။ အဲ့ဒီကနေ ကန်ပိုက်တီးကို ဖြတ်မယ်၊ ကန်ပိုက်တီးကိုဖြတ်ပြီး ကူရုံးမရောက်ခင် နယ်စပ်မှာ လိုဏ်ဂူရှိပါတယ်၊ အဲ့ဒီထိအောင် သူတို့ကို ပို့လိုက်ပါမယ်။ ဟိုဘက်က ကူရုံးမှာ လာကြိုနေတယ်လို့ ကြားပါတယ်။ ကားကြီး ၅ စီးနဲ့ခေါ်သွားတာ ကျန်တာကတော့ လုံခြုံရေး ကားအသေးကတော့ လေးငါးခြောက်စီးလို့ သိရတယ်။ ကားကြီး ၅ စီးကို ဒီကနေ စီစဉ်ပေးတာပေါ့နော်။”
သူတို့ကို ဘယ်ပုံဘယ်နည်း တရားစွဲ ထောင်ချခဲ့တယ် ဆိုတာလေး ပြန်ပြောပြပေးပါဗျ။
“မြန်မာပြည် ဆဒုံးမြို့နယ်တို့မှာရှိတဲ့ သစ်တောတွေထဲမှာ တပ်က တပ်ရင်း ၄ ခုက ၀င်ဖမ်းတာ၊ ဖမ်းမိတဲ့ထဲမှာ ကားအစီး ၄၀၀ ကျော်၊ လူကတော့ ၁၅၀ ကျော် မိတယ်။ မိတဲ့အခါ တပ်ကနေ တရားခံတွေကို ၀ိုင်းမော်ကို ပို့တယ်၊ ၀ိုင်းမော်ကနေ လ၀က က လ၀က ဥပဒေနဲ့ သီးခြား တရားစွဲတယ်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး (လတ်တလောပြဋ္ဌာန်းချက်များ) အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃ (၁) နဲ့ ၆ လ ကျတယ်။ ဒီတရားခံတွေကို တရားစွဲခဲ့တုန်းက ပထမဆုံးက ပုဒ်မ ၄ မှာ ပြည်ထဲရေးက ခွင့်ပြုချက် မရှိရင် စွဲလို့ မရပါဘူး၊ ခွင့်ပြုချက်ကို တင်ထားနေတဲ့ အတောအတွင်းမှာ သူတို့က တရားခံဆိုတာ ရက်ပေါင်း ၃၀ ထက် ပိုချုပ်လို့ မရပါဘူး၊ ၃၀ ထက် ပိုချုပ်လို့ရအောင် ပြည်သူပိုင် ၆ (၁) နဲ့ ရုံးကို တင်တယ်၊ ခွင့်ပြုချက် ကျလာတဲ့အခါမှာ အများနှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃ အရ စွဲတင်တယ်။ ၈၅ ယောက်က တမှု စွဲတယ်၊ ၇၀ ကို တမှု စွဲတယ်၊ အပက ၃ ပဲ။ ၂ မှုစလုံးကို တရက်ချင်းစီပဲ မြစ်ကြီးနားခရိုင်တရားရုံးက စစ်တယ်၊ ၈၅၁ ယာက်ကို ခရိုင်တရားသူကြီး ဦးစိုးစိုးက စစ်တယ်။ ၇၀ ကတော့ ခရိုင်ဒုတိယ တရားသူကြီး ဦးမြင့်ဆွေက စစ်တယ်။ ရှေ့နေကတော့ ကျနော် ဦးခင်မောင်နဲ့ ဒေါ်သီတာခင်တို့ လိုက်တယ်။ စစ်တဲ့ ကာလက ၃ လလောက်ကြာတယ်။ အဲ့နောက် ကျနော်တို့ တရားခံတွေကို အပက ၃ နဲ့ စွဲချက်တင်တယ်။ တရားခံတွေ အားလုံးက ငြင်းတယ်၊ ငြင်းပေမယ်လို့ ခံပြတော့ မပြနိုင်ဘူး၊ တရားခံတွေ အားလုံးကတော့ သစ်ခုတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ငှက်ပျောပင် လာခုတ်တာပါ၊ တချို့ကလည်း အလည်လာတာပါ။ တချို့ကလည်း ဆွေမျိုးတွေဆီ လာတာပါ။ တချို့ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ ရောက်ဖူးချင်လို့ လာတာပါ ဆိုပြီး ငြင်းကြတယ်။ တရားရုံးကတော့ ဇူလိုင် ၂၂ ရက်မှာပဲ အပက ၃ စွဲချက် တင်တာနဲ့ပဲ ယောက်ျားတရားခံတွေကို ထောင်ဒဏ် တသက်တကျွန်းချတယ်၊ လူငယ်နှစ်ယောက်ကို ၁၀ နှစ်စီချတယ်၊ အမျိုးသမီးတယောက်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနဲ့ သူ့ကိုတော့ ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ်ချတယ်၊ ချပြီးတဲ့နောက် အခု ဇူလိုင် ၃၀ ရက်မှာပဲ သူတို့ကို နိုင်ငံတော်အမိန့်နဲ့ ပြန်ပို့နေပြီပေါ့ဗျာ။”
သစ်ခိုးထုတ်မှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် တသက်တကျွန်းချထားတဲ့ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်တို့ရဲ့ တရားခံ တရုတ်လူမျိုး ၁၅၀ ကျော်ကို တပတ်ဆယ်ရက်အတွင်း ပြန်လွှတ်လိုက်တဲ့အပေါ် ဘာများ မှတ်ချက်ပေး ပြောလိုပါသလဲ။
“မှတ်ချက်မပေးလိုပါဘူး၊ ကျနော်တို့က မလွတ်ဘူးဆိုရင် အယူခံတက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတာပါ။ နိုင်ငံတော်က အခုလို အမိန့်ချပြီး လွှတ်လိုက်တော့ သူတို့ ကံကောင်းတယ်ပဲ ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။”
၈ရက်ပဲဖမ်းပြီး.. ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာမှာ.. နိုင်ငံရေးကစားကွက်ကတော့ တော်တော်ပါမယ်ထင်တယ်..။
ထောင်ချကတည်းက.. သစ်ခုတ်တာလောက်ကို.. တသက်တကျွန်းချတယ်ဆိုတာကြီးကလည်း.. ဆန်း..။
တကယ်က.. အဲဒီကတည်းက.. ပလန်ရှိပြီးသားပေါ့…။
လူထုကဘယ်လိုတုန့်ပြန်သလည်းကြည့်ပြီး.. မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းကို.. ကစားမယ်ယူဆရတယ်..။
စိန့်ပြည်ကြီးခမျာ..ဒေါ်လာနဲ့စင်ပြိုင်လုပ်ဖို့.. ကြိုးစားလိုက်တာမို့.. ငွေကြေး.. စတော့တွေလှိမ့်ကျပြီး.. လိမ့်နေအောင်ခံနေရတဲ့သဘောရှိတယ်..။
ဘိုချုပ်ကြီးတွေရဲ့.. ပိုက်ပိုက်တွေ.. ဘယ်လောက်များပါကုန်သလည်း…မသိ..။
နောင်မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပြင်ဆင်လုပ်ရမလဲ.. အရေးတကြီးပြင်ဆင်သင့်ပြီ..။
ဂလိုဘယ်ဝမ်းမင်း..ကမ္ဘာပူနွေးလာတာဟာ.. ပုံပြင်မဟုတ်…။ တကယ်ဖြစ်တာမို့.. ပင်လယ်ရေကတကယ်ကို… တနှစ်ပြီးတနှစ်..မြင့်လာနေတာပါ..။
ယူအက်စ်မှာ.. ပင်လယ်ကမ်းနားမြို့တွေအကုန်လိုလို… ပြင်ဆင်နေကြ..ပြင်ဆင်ပြီးကြပြီ…။
LA ဆို.. ဒေါ်လာမီလီယံရာချီအကုန်ခံပြီး.. LA မြစ်ကမ်းဘောင်ကို ၅ပေလိုက်မြှင့်နေတာ..လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်ကျေ်ကတည်းက…။